German Singular Plural Glossary, Glossary of German Words | Kudzidza ChiGerman, Kudzidza ChiGerman
ChiGerman Singular Turkish Pluralism Dictionary
musha » Mashoko echiGerman » ChiGerman Singular Turkish Pluralism Dictionary
Sawa shamwari shamwari, munyaya ino tichataura nezvimwe nzvimbo yakanaka yeduramazwi. Iyi shanduro inozobatsira vazhinji vevadzidzi vevadzidzi. Nguva nenguva, tinokumbira vadzidzi kuti vabvunze kana kune duramanzwi rinoratidza huwandu hwemashoko echiGermany. Kubva pane mibvunzo iyi, isu tava kutaura zvino pamusoro penzvimbo yakasiyana-siyana inoshandiswa kushandiswa kwemashoko inoratidza zvose zvinyorwa zvemashoko echiGerman uye zvigadzirwa zvadzo nezvakawandisa. Zvisinei, nzvimbo ino haisanganisi mazwi echiTurkey muchiGermany, isu chete tinoshandisa izwi kuongorora, mamwe maitiro emashoko, muzvizhinji, artikellerini, zvivako, zvinyorwa, nezvimwe zvakagamuchirwa. inoratidza chimiro. Inonzi inozivikanwa seGerman Singular Plural Dictionary kune dzimwe nyika uye inotarisa semashoko akazara.
Hungu, ngatitipei kero yepaiti yacho nezwi rimwe chete duramazwi:
Hongu shamwari, https://www.canoo.net/ Iwe unogona kutsvakurudza pamusoro pemashoko mazhinji echiGerman uye kudzidza zvinyorwa nemuzhinji wemashoko.
Nzvimbo iyi inyanzvi yegirama yemapepa panzvimbo yeGermany imwe nendimi yemitauro yakawanda uye unokwanisa kuwana sarudzo yemashoko pane ino. Somuenzaniso, unogona kuwana ruzivo rwakawanda pamusoro pematauriro akawanda echiGerman akaita sei, zvikamu zvakagamuchirwa zvavakagamuchira, izvo zvibatanidza zvakabikwa, nekudaro.
Zvino, ngatitsanangurire kuti tingashandise sei site iyi:
Kutanga, enda ku https://www.canoo.net/. Apo patinopinda muwebsite iyi, tichaona chitubu sezasi.
Mumufananidzo uri pamusoro apa, nyora SHOKO RAKO rakanyorwa muzwi raunoda kutsvaga, shoko rechiGerman raunoda kudzidza ruzhinji rwezwi raunonyora. Takanyora izwi BUCH maererano nekuva muenzaniso. Ngationei kuti shoko rokuti Buch chii? Kana ukanyora Buch uye chengetedza ENTER kana chengeta bhodhi ya Suchen, iwe uchaona chinyorwa seyizvi:
Takanyora Buch uye takamanikidza ENTER uye skrini sepamusoro zvakasvika. Iye zvino pahwindo iri, sezvakaratidzwa mumufananidzo uri pamusoro apa, tinodonha pamutsara wakatsvuka uye skrini inotevera inowanikwa:
KUFUNGA IZVI: German Kitchenware
Hungu shamwari, sezvakaratidzwa mumufananidzo uri pamusoro apa, pane zveruzivo rose nezveshoko Buch. Takaisa huwandu hwezita rokuti Buch mumutsara wakatsvuka kumusoro, peji ino unogona kuwana mutsara wezwi Buch, nevamwe. Kana iwe uchida kutsvaga mamwe mazwi iwe unogona kutsvaga kubva kune ino yepaiti uye iwe unogona kudzidza huwandu hwemashoko ose echiGerman.
Panzvimbo ino haungagoni kungodzidza huwandu hwemashoko mamwe muGermany, asi unogona kuwanawo maGerman echiito uye asinganzwisisiki mundima ino. Iwe unongoda kutsvaga chiito chaicho chaunoda kudzidza.
Iwe unogona kutora mukana wechinhu ichi chakakosha chiGerman chirongwa chemashoko nekuchiwedzera icho kune iwe unofarira. Avo vanofarira chiGerman vanofanira kushanyira. Zvechokwadi mushure mekunge shanduro yedu Tabii
Vadikanwi shamwari, muchiri kutaura pamusoro pemashoko echiGerman muchikwata chedu chekukuyeuchidzai nyaya shomanana, kana muchida kuverenga zvidzidzo izvi.
ChiGerman Single Names Pluralization Rules
Zvakawanda Zvikamu zveGerman Nouns (Plural Subject)
Vadikanwi shamwari, tinokutendai nokuda kwechido chenyu mune webhusaiti yedu uye tinokumbira iwe kubudirira mune zvidzidzo zveGerman.
Unogona kunyora chero mubvunzo waunoda kutibvunza mubvunzo unotevera.
Private Tutors İstanbul
Zvinyorwa zveGerman Words zvinonzi muGermany muupenyu hwedu hwezuva nezuva ...
Quotations Mechi yeGreek mune ino chinyorwa yaive nenyaya yemavara eGerman ...
Nhaurwa Mukati ino tinodzidza mabasa echiGermany vadzidzi vanokosha.
MUVANZI KUCHOKURUKURWA - 1 KUBVUNZA
16 Range 2018, 09: 05